Umvelisi womboniso we-LED - JYLED
UkuRenta isikrini sokubonisa i-LED
Umboniso we-LED oRentwayo wangaphandle
Stadium yangaphandle LED Screen
I-Flexible LED Display Screen
Isikrini sethayile somgangatho we-LED
Umboniso ocacileyo we-LED
Isikrini sokukhanya se-LED sesiboniso
Isisombululo somboniso we-LED
Ukurenta ngaphakathi kwesikrini se-LED
Umboniso we-LED wangaphandle oRentwayo
Isikrini esiguqukayo se-LED
Isikrini sePole yokuKhanya kwe-LED
Ipowusta ye-LED Screen
Iimpawu zeJYLED Yazisa
Ukuseta ngokukhawuleza nangokulula
Qhagamshela ngokulula isikrini se-LED kuso nasiphi na isixhobo kwaye ulawule ngoko nangoko umxholo wakho ngesoftware ye-LED, kunye neqela lethu lobuchwephesha linokukunceda ulawulo olukude kwaye likufundise indlela yokwenza.
Izikrini zokubonisa ezikhokelwayo ziguquguquka ngakumbi kwaye zisebenza kakuhle ukukunceda ukulawula nokubonisa umxholo owufunayo, nokuba ingaba isikrini sevidiyo esiphezulu okanye umfanekiso omhle, akunzima kumboniso we-LED.
Ungasasaza naluphi na ulwazi lwentengiso kunye neevidiyo zokuthengisa zitsala abathengi ekujoliswe kuzo kwaye andise inzuzo. Isikrini se-LED sorhwebo lukhetho lokuqala lokupapashwa kwenkampani ukufezekisa le njongo.
Akukho ukusetyenziswa okufihliweyo
Ukususela kwimveliso ngofakelo kunye nenkxaso eqhubekayo yabathengi kunye nezobugcisa, lawula ngokulula izikrini zakho zedijithali ze-LED kunye nesakhiwo sethu samaxabiso esilula kwaye akukho zindleko ezongezelelweyo.
Khetha iimveliso zakho
Isikrini se-LED sokuRenta ngaphandle
isikrini esibonakalayo sangaphandle
UMGANGATHO WE-LED WE-LED UBONAKALISA ISKINI
IPOLLI YOKUKHANYA YE-LED BONISA ISIKHONZO
Ukuba ukulungele ukufumana i-LED yodonga lwevidiyo, singathanda ukuva kuwe!
Khetha imeko yesicelo sakho
Nazi ezinye iimeko zesicelo eziqhelekileyo
Ukurenta ngaphandle kwesikrini se-LED
Umboniso we-3D we-LED
Isikrini seTayile soMgangatho we-LED
DJ Bar LED Bonisa
Uyenza njani isikrini esikhokelela kwi3D?
Kwiminyaka yakutshanje, imfuno yentengiso yangaphandle iye yaqhubeka ikhula, kwaye iteknoloji ye-LED yangaphandle izikrini ezinkulu ziye zaqhubeka zikhula.Ngokukodwa, ukubonakala rhoqo kwesikrini se-3D LED.
Umboniso we-pitch ocolekileyo we-LED VS mini isiboniso se-LED VS isiboniso se-LED esincinci
I-2020 iya kuba ngunyaka wokuqala wokuboniswa kwe-LED encinci. Kuthiwa umzi-mveliso otyalwe yi-Apple uya kubonelela ngeziboniso ze-LED ezincinci ze-Apple Watch ngo-2023: le yokugqibela iya kuba neenzuzo ezinkulu ezinjengokukhanya okuphezulu.
Indlela yokudibanisa imodyuli ye-LED kwibhokisi ye-LED
Kukho abathengi abaninzi abanamandla ezandla ezomeleleyo, abanomdla malunga nokuba imodyuli ye-LED idityaniswe njani? Ndifuna ukufunda kwaye ndidibanise ngokwam. Emva koko siya kuqala ukusuka kuhlelo lwebhokisi
Yintoni isikrini se-LED esingaqhelekanga? Zeziphi iindidi ezikhoyo?
Ngaba sikho isikrini esicacileyo se-P3.91 se-LED?
Ziziphi iindlela zofakelo lwe-P2.976 ebonisa ngokucacileyo i-LED?
I-pitch encinci ye-LED VS Mini ye-LED
Sesiphi isiboniso esilungele amehlo?
Ngaba i-LED okanye i-OLED ingcono?
Ingaba isikrini se-LED sixabisa malini?
Ingaba udonga lwe-LED luxabisa malini?
Ngaba i-LED ingcono kune-LCD?
I-LED encinci ye-pitch ibonisa i-VS LCD yokudibanisa isikrini
Gcwalisa tami ifomu online.
ukukhanya komboniso we-LED Isibhengezo sesitrato seSixeko se-LED' umboniso we-LED oguquguqukayo ixabiso eliguquguqukayo lokubonisa i-LED Umboniso we-HD we-LED khetha idispleyi encinci ye-LED yangaphakathi IJYLED Ukuchazwa kwe-LED abavelisi bomboniso we-LED Uhlobo lokubonisa lwe-LED Umboniso we-elektroniki we-LED Isikrini esiguqukayo se-LED Umboniso wethayile womgangatho we-LED Isikrini sethayile somgangatho we-LED Isikrini sethayile somgangatho we-LED okrelekrele Isikrini sepali sokukhanya kwe-LED Iimodyuli ze-LED Umboniso we-LED wokurenta Isikrini sesibhakabhaka se-LED Umboniso omncinci we-LED izikrini ezijikelezayo ezikhokelayo Isikrini sesikhokelo sendlela ye-LED Isikrini esicacileyo se-LED Umboniso we-LED we-Meta-universe Iliso le-3D le-LED ibonisa umboniso we-LED wangaphandle yangaphandle LED isikrini esikhulu lungisa umboniso we-LED owaphukileyo Umboniso omncinci we-LED Umboniso omncinci we-LED udonga olungasemva oluqeshisayo Umboniso we-LED wentengiso yesitalato Iinkampani eziphezulu ze-10 zokubonisa i-LED top ezilishumi LED dispaly brand Inkampani ye-LED ephezulu yeshumi ephezulu Ukubonisa okungahambelaniyo kwe-LED iintlobo zemiboniso ye-LED eguquguqukayo ifestile ye-LED yesikrini esicacileyo
ibandla 4K HD umboniso LED
P3.91 Umboniso we-LED oRentwayo waNgaphakathi
I-P5 yangaphakathi ekhokelela kwisikrini somboniso
I-P1.667 yangaphakathi ye-LED ye-high-definition display
Umboniso wePixel oMhle we-LED
Singumvelisi oqeqeshiweyo we-P2, i-p2.5 ye-Fine-Pitch ekhokelwayo, i-P3, i-P4, i-p4.81, i-P5, i-P6, i-P8, i-P10 egcwele umbala ogcweleyo we-HD umboniso ohonjisiweyo, uchungechunge lwenqanaba lokurenta i-LED ebonisa ngaphakathi, kunye nochungechunge lwangaphandle. Umboniso we-LED, ukubonelela ngomgangatho ophezulu, inkcazo ephezulu, imveliso ye-LED enexabiso eliphezulu.
Okwangoku, eyona nkampani LED full-umbala umboniso ubunjineli yokuvelisa, yangaphakathi uthotho isiboniso LED, uthotho lwangaphandle umboniso LED, iqonga irenti uthotho isiboniso LED, ithayile umgangatho interactive isiboniso LED, ikhusi transparent, njl. JYLED ineenzuzo zomgangatho ozinzileyo, ecacileyo. umfanekiso, umbala onemibala, ukonga amandla, ubomi benkonzo ende, kunye nexabiso elifikelelekayo.
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, nceda uqhagamshelane nomphathi wethu wenkonzo yabathengi: + 86-13553831871
Umboniso weThayile woMgangatho we-LED
I-LED yangaphandle Dispaly enkulu
Umboniso we-LED wenqanaba lokuRenta
Mob / Whatsapp: +86-13553831871
I-Facebook-f Instagram LinkedIn Whatsapp
Umboneleli womboniso we-LED
Thenga iLed Screen
Umboniso weLed wangaphakathi
Ilungelo lokushicilela © 2010-2021 SHENZHEN JYLED Technology CO.,Ltd.